Big In Japan! 'Psycho Goreman' Nahazo Art avy amin'i Tatsuki Fujimoto, Mpanoratra Manga 'Chainsawman' - iHorror
Home Subgenres mahatsiravinaHorohoro amin'ny hatsikana Big In Japan! 'Psycho Goreman' Nahazo zavakanto avy amin'i Tatsuki Fujimoto, 'Mpanoratra Manga' Chainsawman '
by Jacob Davison Jolay 21, 2021
by Jacob Davison Jolay 21, 2021 1,439 hevitra
Sarotra inoana fa vao volana vitsivitsy lasa izay izay ilay hatsikana mampihomehy an-tsehatra ataon'ny ankizy (sy karazana karazana hafa) Psycho Goreman (na PG raha fintinina) avy amin'ny Ny Void ary Miverina i Leprechaun Navoaka tamin'ny vahoaka tsy fantatra ny talen'ny Steven Kostanski. Nanam-bintana aho fa iray tamin'ireo voalohany niaina ilay hazakazak'adala tamin'ny Beyond Fest tamin'ny taona lasa ary PG efa namely nomerika, horonantsary an-trano, ary streaming manokana ao amin'ny Shudder. Ary toa niely eran'izao tontolo izao ny fanjakan'ny mpampihorohoro an'i The Archduke of Nightmares, satria Psycho Goreman dia mahazo famoahana teatra any Japon amin'ny 30 Jolay. Miaraka amin'ny aingam-panahin'ilay sarimihetsika nalaina tamin'ny ampahany tamin'ny sarimihetsika monstera / hetsika tokusatsu Japoney toa an'i Keita Amemmiya's Zeiram ary Hakaider, ity famoahana tsena ity dia tsy tokony hahagaga.
Sary avy amin'i Amazon
Ary ny buzz dia mitombo hatrany amin'ny maha hetsika / manga mahatsiravina Chainsawman Mpanoratra / mpanakanto Tatsuki Fujimoto no naseho ilay sarimihetsika talohan'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy azy ary nisarika zavakanto tsara mampatahotra an'i PG sy Mimi! Ny tompon'andraikitra Psycho Goreman Kaonty twitter Japoney ary Vaovao Oricon, Fujimoto dia navela hijerijery ilay sarimihetsika tamin'ny fahafinaretany ary nanome azy famerenana mahafinaritra, tamin'ny fanamarihana fa “Ity no sarimihetsika mahaliana indrindra tamin'ny taona!”
Sary tamin'ny alàlan'ny Twitter
Ny kanto resahina dia mampiseho an'i Psycho Goreman miaraka amin'ny vatany mihetsiketsika sy mibontsina ao ambadiky ny Mimi iray izay mampatahotra kokoa mitazona ny vato majika izay mamela azy hifehezana ny demonia eny rehetra eny. Efa mpankafy ny Chainsawman manga satria nihazakazaka ilay andiany tany am-boalohany, tsy mampino ny mahita ny toetran'ny Psycho Goreman namboarina tamin'ny fomban'i Fujimoto sy tena mety. Miaraka amin'ny famoahana Japoney ny Psycho Goreman roa herinandro latsaka dia hahaliana kokoa ny mahita hoe inona ny karazana fiantraikany sy ny fihetsika hafa hitranga eo amin'ilay sarimihetsika!